UBOB DYLAN: UVAVANYO LWEALBHAMU ENGALUNGANGA KUNYE NEROWDY - IINDABA
Iindlela ezimbi kunye neRowdy
Kumashumi amathandathu eminyaka kwikhondo lakhe lomsebenzi, uBob Dylan uhambisa irekhodi elihle nelicokisekileyo. Yeyona albhamu inqabileyo ye-Dylan ecela ukuba iqondwe kwaye yehle ukuhlangabeza abaphulaphuli bayo.
Kule minyaka ingama-60, uBob Dylan ebethetha nathi. Ngamanye amaxesha uphefumla, uhlala engafundeki, ngamanye amaxesha isiprofeto, amazwi akhe azenzele intsomi. Kodwa ukuthula kwakhe kunentsingiselo efanayo. Ngaphantsi komzuzu kwi-albhamu yakhe ye-39, athe wagqiba kwelokuba ayitsalele umnxeba Iindlela ezimbi kunye neRowdy , isincedisi kubonakala ngathi siyaphela. Ithontsi ngobuqili; kwakungekho nto ingako apho kwindawo yokuqala-ukudityaniswa komtya ngokudibanisa, intsimbi yokuhombisa ethambileyo, ezinye ii-funereal motifs ezivela kumagitare akudala kunye nombane. Yimeko efanayo yangorhatya eyayiquka eyokugqibela kaDylan Ntathu istudiyo iialbham , trilogy ethembekileyo yemigangatho yaseMelika eyake yathandwa nguFrank Sinatra. Kodwa ngoku ucula amazwi akhe, kwaye ngaye. Uzifanisa no-Anne Frank no-Indiana Jones, uthi uthi ungumzobi nembongi, uyavuma ukuba uzive ungonwabanga, ethambile kwaye engaxoleli. Ndiqulathe izinto ezininzi , he croons, kuye nawuphina ongakhange aqaphele okwangoku.
Elinye i-albhamu lilandela lo msonto: unikwe indawo engaphezulu kunamagama akhe, uculwe kamnandi eneminyaka engama-79, ethetha nezinto esaziyo ukuba ziyinyani, esebenzisa izibizo ezifanelekileyo kunye nobungqina bokuqala. Ngamanye amagama, yingoma enqabileyo ye-Dylan ecela ukuqondwa, eyehlayo ize kudibana nabaphulaphuli bayo. Kwezi ngoma, ukufa akuyiyo inkungu enzima exhonywe kuzo zonke iindlela zobomi; yindoda ebuleweyo ngelixa ilizwe libukele, umsitho unexesha, indawo kunye nomhla. Uthando alusilo iqhina likaShakespearean okanye isiqhulo senkanuko; Sisivumelwano esibuthathaka phakathi kwabantu ababini, into oyenzayo ingqondo yakho kwaye uzinikele kuyo. Amazwi omculo ayinto yokwenene, abambekayo, ayizifaniso, utshilo uDylan INew York Times . Ke xa ecula ngokuwela iRubicon, uthetha ngomlambo e-Itali; xa ekuxelela ukuba wehla waya eKey West, ufuna wazi ukuba unxiba imozulu.
Okwangoku, nguBob Dylan, kwaye siqeqeshelwe ukumba nzulu. (Kwakuloo nto Amaxesha Udliwanondlebe, uyabuzwa ukuba ingaba i-coronavirus ingabonwa njengokubala ngokwebhayibhile — umbuzo onzima ukucinga ukuwubuza komnye umculi ophilayo.) Sifunde ukuza eDylan ngezi ntlobo ze-quandaries, kwaye amaxesha amaninzi kunokuba ushiye wanelisekile. Kodwa kuko konke ukubhekisa kwimbali noncwadi, ukubhala kubhekisele ekungaqiniseki. Kwimbali ebhaliweyo ebizwa ngokuba yi-My Own Version yakho, uDylan uhlabelela ngokudlala uthixo njengoko ehlahlela kwiindawo zokungcwaba nasemangcwabeni ukuvuselela izidumbu ezimbalwa kunye nokufumana ulwazi lwabo. Phakathi kwemibuzo ayibuzayo: Ungandixelela ukuba kuthetha ntoni: Ukuba okanye ukungabikho? Ngaba kukho ukukhanya ekupheleni kwetonela? Asizifumani iimpendulo; ekuphela kwento esiyiva kukunganyaniseki: i-slapstick horror enikezelwa njengehlaya ezikhoyo.
Umoya wevaudevillian owawugqitha ngo-2001 Uthando nobusela nango-2006 Amaxesha Amhlanje ubukhulu becala ithintelwe kule ngoma inye. Kodwa kukho ezinye izinto ezijikajika entloko. Ubungakanani beqhude yakho abuyi kukuyisa ndawo, uyakrokra lutshaba olufungelweyo, olunokuba kukufa uqobo, kuMkhweli oMnyama. Ndingowokugqibela kwabangcono, ungangcwaba abanye, uqhayisa ngoMprofethi wobuxoki, ebiza umsila onamaqhuqhuva obalisa kakhulu ngo-2012 Isaqhwithi , ilizwi ebelibonakala ukuba liyaminxa ngelixa ebekuthuka uzama ukunceda. Ezi zinto zigqwethekileyo zikhokelela kwimigca engalibalekiyo-kunye nexesha elamkelekileyo lobunewunewu-kodwa ukuhlekisa kwakhe, uburharha obungenanjongo ayingombono. Akukho ziphazamiso; uthetha ngononophelo, cwaka, nangokunyaniseka.
Iphumela kwirekhodi elihle nelicokisekileyo. Iingoma ziyabetha-zixinene ngokwaneleyo ukuba zikhuthaze ikharityhulamu, zikrelekrele ngokwaneleyo ukuba zingacaphula njengemizekeliso. Idlalwe liqela lakhe lokundwendwela, ngokubonakala okungaphantsi kuFiona Apple kunye noBlake Mills, umculo ubukho bomoya. Isandi sayo siyi-threadbare kunye ne-hypnotic, exhaswa ziikwayara ezincinci kunye nezixhobo ze-acoustic, ukujika okubukhali okuvela kwimiboniso bhanyabhanya engathandekiyo yeerekhodi zakhe zenkulungwane yama-21. Njengoko kubonisiwe kwincwadi kaDaniel Mark Epstein IBallad kaBob Dylan: Umzobo , UDylan waqalisa ezo seshoni ngokudlala nabo bandimlingisa omnye umkhondo womzobo womzobi wokufaka isicelo kuyo nayiphi na ibhetshi yeengoma awayeze nazo studio. Kukho iingqinisiso ezicacileyo zalo mculo ngokunjalo-UBilly The Kid Emerson kuMprofethi wobuxoki, uJimmy Reed kwi-Goodbye uJimmy Reed-kodwa imidlalo ayifanelekanga, ayikho nto. Yimiblues kunye nomculo wesintu obonakala ngathi ungene ngaphakathi nangaphandle kwengqondo, phakathi-kwehlabathi okuchazwe kwimigca yokuvula: Namhlanje nangomso nangolo, Iintyatyambo ziyafa njengazo zonke izinto.
Ukususela ngo-1997 Ixesha liphelelwe yingqondo , ukubuyela kwimo-yasemoyeni emva kwexesha elide lokubhadula, ukufa kuye kwaba yeyona nto ixhalabisa kakhulu uDylan, kangangokuba abanye bayifunde njengesiqhelo somntu. Yeyiphi, ewe, eyenze mandundu ngakumbi. Ewe, iingoma zakhe zamva nje zijongana nokufa. Kodwa andibonanga namnye umgxeki esithi: ‘Iyajongana wam ukubhubha ’- uyazi, eyakhe, uDylan iqatshelwe . Kubonakala ngathi usamkele esi sikhalazo njengokusilela kobugcisa kwaye ubuyile neengoma ezingalawulwa gwenxa zizifundo zabo. Iingoma ezimbini zokugqibela zivuliwe Isaqhwithi yathetha ngokutshona kweTitanic kunye nokubulawa kukaJohn Lennon -iziganeko zembali ezikhoyo ngoku ngenxa yenkcubeko enkulu. Uyaqhubeka kwaye uyaphucula kule ndlela kuyo yonke indawo Iindlela ezimbi kunye neRowdy , sisebenzisa amanqaku kwimbali ukubonisa into kwindalo iphela malunga nelifa lethu elifutshane, eliqhelekileyo. Ndiyathemba ukuba oothixo bayahamba ngokulula kunye nam, ucula ngaphakathi Ndenze Ingqondo yam yokuZinikela kuwe. Ngomzuzu, uyalibala imeko yendoda eculayo; umthandazo wakhe uvakala uthobekile, ubuthathaka njengaye nawuphina umntu.
UDylan uphonononge lo mculo ngo-Matshi ngokukhupha iMurder Most Most Foul, eyona ngoma inde kakhulu kwikhathalogu yakhe ngoku kuqala kakhulu uNombolo 1 ongatshatanga . I-ballad yemizuzu eyi-17 ivala irekhodi ngokuguqula ubume bezinye iingoma zokufa: Uqala ngokuphela. Ngokwamazwi abambekayo, uDylan uchaza ukubulawa kukaJohn F. Kennedy: Bayivuthulula intloko ngelixa esesemotweni, uyacula. Oku kulandelayo libali lobomi: umhlaba, inkcubeko kunye nobugcisa, obuzinzileyo ngaphandle kwakhe. Ngokusebenzisa ixesha layo lokugqibela elimangalisayo, kunye nelungiselelo elizwakala njengeokhestra encinci epakisha izixhobo zabo, uDylan wenza izicelo ezilishumi elinesibini kwi-iconic '60s DJ Wolfman Jack: Mystery Train, Moonlight Sonata, Ungandivumeli ukuba ndiqondwe gwenxa. Yinkqubo kanomathotholo-enye ye-Dylan abathandayo , ela lizwi liphuma emzimbeni lithetha nathi ngamanye amazwi abanye abantu. Kodwa njengokuba umculo udlala, iba kukuvuka, ingqokelela yemimoya, isiphazamiso esifanelekileyo kumamkeli-zindwendwe wethu ukuba aphumele ngaphandle ebusuku, yedwa.
Ndisandula ukuva iindaba malunga noRichard omncinci kwaye ndibuhlungu kakhulu, Dylan ubhale kwimithombo yeendaba zakhe kwinyanga ephelileyo. Wayeyinkwenkwezi yam ekhanyayo kwaye ekhokela ukukhanya xa ndandiseyinkwenkwana nje. Wavakala ngathi uqhekeka; Emva kwayo yonke loo nto, uDylan ukhankanye izihlandlo ezininzi uRichard omncinci ngokuyilwa komsebenzi wakhe, isandi sakhe, kwaneenwele zakhe. Obu bungozi babuphantse baba yingxaki. Sesiqhele ukudibana noDylan umgama — kwivesi okanye kwikhowudi, kwenye indawo engaphaya kokufikelela kwethu. Ngoku, wayesicela ukuba simcingele njengomntwana eMinnesota, emamele unomathotholo kwaye ecinga ngekamva lakhe. Ngendlela ethe cwaka, Iindlela ezimbi kunye neRowdy esinye isimemo. Yakha isazisi sam ngaphakathi nangaphandle, ucula kuMama weMuses, Uyayazi ukuba ndithetha ngantoni. Mthabathe ngelizwi lakhe kwaye sisandla esifikelelweyo, ithuba lokujonga umhlaba ngamehlo akhe ngaphambi kokuba uqhekeke. Umbono mhle; nangcono, iyinyani kwaye yeyethu.
Mamela olona luhlu luDlalwayo loMculo oluLungileyo Spotify kwaye Apple Umculo .
I-albhamu yababali abade abanobundlobongela
daft punk umculo wevidiyo
I-albhamu entsha ye-grimes 2015
ndiva umhlaba omtsha
utata okhohlakeleyo akukho ndlela yakuphuma
ilanga kil inyanga benji
ukucofa imibono yemizimba itshiswa